Iindaba - Zeziphi izinto eziluncedo kwinkqubo yolawulo lwe-warehouse ye-RFID?
Nangona kunjalo, imeko ekhoyo ngoku yeendleko eziphezulu kunye nokusebenza okuphantsi kwikhonkco le-warehouse, ngophando lwabaqhubi be-warehouse yeqela lesithathu, iinkampani zokugcina iimpahla eziphantsi kwefektri kunye nabanye abasebenzisi bokugcina, kufumaniseke ukuba ulawulo lwendawo yokugcina impahla lunezi ngxaki zilandelayo:
1. Iimpahla sele ziza kufakwa kwindawo yokugcina impahla, kwaye irisithi yendawo yokugcina impahla ayikathunyelwa, ngoko ayikwazi ukufakwa emsebenzini ngokukhawuleza.
2. Isithuthi sokuhanjiswa sihambe ixesha elide. Emva kokujonga uluhlu lwempahla, kufumaniseka ukuba iimpahla azikho kwindawo yokugcina impahla.
3. Iimpahla zifakwe kwisitoreji, kodwa zikhohliwe ukurekhoda indawo yokugcina okanye indawo yokugcina engafanelekanga irekhodwa, kwaye kuthatha enye isiqingatha sosuku ukufumana iimpahla.
4. Xa beshiya indawo yokugcina impahla, abasebenzi kufuneka babaleke baphindele emva naphambili kwiindawo zokugcina iimpahla ezininzi ukuze bathathe iimpahla, kwaye ixesha lokulinda izithuthi lide.
5. I-plate yientsuku ezimbalwa kuphela, ngoko ukusebenza kakuhle kuphantsi ngokwenene, kwaye ukusebenza kakuhle kuphantsi, kwaye kukho iimpazamo eziqhelekileyo.
6. Inani elikhulu leemveliso zexesha elizayo elisondeleyo lingabalwa rhoqo xa i-inventory ithathwa, kwaye okokuqala, okokuqala kuye kwaba yintetho engenanto.
Ubukho bezi ngxaki zogcino zingentla zibe nefuthe elibi kuphuhliso nokusebenza kweshishini, kwaye kuyimfuneko ukusombulula ngokukhawuleza kunye nokuphucula inqanaba lolawulo lwesitora. Ukuvela kwenkqubo ye-RFID yolawulo lwendawo yokugcina impahla ibonelela amashishini ngemowudi yolawulo eluncedo ngakumbi, esebenzayo nekrelekrele.
Ke, ngokujongana nezi ngxaki zingentla, zeziphi iingenelo zenkqubo yolawulo lwendawo yokugcina impahla yeRFID?
1.UHF Iithegi zeRFID
Ngokukhupha Iithegi ze-elektroniki ze-RFID kwipallet nganye kunye nendawo yokugcina kwindawo yokugcina impahla, kunye nezixhobo ezizodwa ezahlukeneyo, inokuqonda ukuchongwa okuzenzekelayo kwepallet kunye nolwazi lokugcinwa kwempahla, oluququzelela kakhulu umsebenzisi ukulawula iimpahla ze-inventory.
Kwangaxeshanye, nge-UHF Ithegi yeRFID ukubophelela kwimpahla, inokwahlula ngokuchanekileyo iingxaki zolawulo ezichanekileyo ezifana nebhetshi, imodeli, igama lemveliso, ixesha lokugcina, umthengisi, isimo, njl., kwaye ulawulo kunye nolawulo luhambelana ngakumbi neemfuno zolawulo lwangoku.
Imisebenzi yokufumana yonke imihla inokudityaniswa ngokuzenzekelayo kwisixhobo esiphathwa ngesandla seRFID, kwaye unokwazi iinkcukacha zomsebenzi ngaphandle kweerisithi zephepha.
Idatha yerisithi ayifuni ukuba irekhodwe ngesandla, kwaye isistim iqokelela ngokuzenzekelayo kwaye ibale ukuqinisekisa ukuchaneka kwedatha yerisithi.
Emva kokuba iimpahla zifikile kwindawo yokugcina impahla, inkqubo iya kuhlaziya ngokuzenzekelayo ubungakanani be-inventri kwindawo yokugcina impahla, kwaye namaxwebhu aya kugqitywa.
Emva kwe Inkqubo yolawulo lwe-warehouse ye-RFID ihlanganiswe ne-RFID ye-forklift, imisebenzi yeshelufu inokukhutshwa kwi-RFID ye-forklift yokubulawa.
I-RFID ye-forklift ihlola ngokuzenzekelayo i-pallet, ibonisa ulwazi lwempahla ye-pallet kunye nolwazi lokugcinwa kwempahla, ihambisa indawo yokugcina impahla ngexesha langempela, kwaye yandisa uluhlu lwempahla kwi-shelf.
Inkqubo iya kwenza ngokuzenzekelayo indlela yokuhamba yokuchola, akukho mfuneko yokubuyela umva naphambili, uhambo nje olunye ukugqiba ukukhetha iimpahla.
I-RFID ye-forklifts ihlola iithegi zepalethi ze-RFID zokuqinisekisa ngokukhawuleza ulwazi lwempahla ephumayo, kwaye inokwenza uqinisekiso lokuqala-lokuqala lokuphucula ukuthengiswa kwempahla.
Emva kokuba i-outbound igqityiwe, i-inventri ephumayo iyancitshiswa ngokuzenzekelayo.
5. Uluhlu lwempahla
Akukho mfuneko yeerisithi zempahla yephepha, kwaye iqonga le-RFID leselula lomsebenzi linokukhangela ngaphandle kwamacingo iirisithi zenkqubo kwi-intanethi.
Akukho mfuneko yokurekhoda ulwazi lwedatha ye-inventri ngesandla, kwaye inkqubo ixhasa iirekhodi zokusebenza kwisayithi.
Ukuchaneka kwe-inventri kufikelela kwinqanaba lendawo kunye nenqanaba le-pallet, okwenza ukuba uluhlu lube lula ukuphumeza nokuphumeza; xhasa uluhlu lwempahla kunye nendawo yokugcina impahla ngaphakathi nangaphandle kweshishini ngaxeshanye.
Idityaniswe nokusetyenziswa kwe-RFID ye-forklifts, isantya se-inventri sikhawuleza, kwaye idatha ye-inventory ye-inventory ishwankathelwa ngokuzenzekelayo.
Ukusetyenziswa kwenkqubo ye-RFID yolawulo lwendawo yokugcina impahla ilula kakhulu imisebenzi yemihla ngemihla yendawo yokugcina, kwaye idatha iqokelelwa ngokuzenzekelayo kwaye ihlaziywe, isusa imfuno yokungena ngesandla, ngaloo ndlela idala iziko lokugcina elihlakaniphile kunye ne-automated kwishishini ukunciphisa iindleko kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle. .
Ixesha lokuposa: Dec-31-2021